Japan Shopping Festival Summer 2018 – Mandalay Tourism
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နွေရာသီဈေးပွဲတော်သည် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် အကြီးမားဆုံး ဈေးပွဲတော်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဈေးပွဲတော်ကို တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကြိမ် ကျင်းပပါသည်။ ထိုဈေးပွဲတော်တွင် ကုန်တိုက်ကြီးများ၊ အီလက် ထရောနစ်ပစ္စည်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များ နှင့် စတိုးဆိုင်များမှ အထူးလျော့ဈေးများနှင့် events များလုပ်ဆောင်ကာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့လာရောက်ရန် အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် free ရရှိနိုင်မည့် promotion အစီ အစဉ်များလည်းပါဝင်ပါသည်။
Japan Shopping Tourism Organization (JSTO)
Ⅰ. Celebrating an Expansion of Tax Exemption (အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်း)
Tax exemption program (အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်းအစီအစဉ်) ကို ခရီးသွားများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဈေးဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၈ ဇူလိုင် (၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သည်။ Come enjoy shopping in Japan! ဂျပန်နိုင်ငံ ဈေးပွဲတော်(Japan Shopping Festival) စတင်ကျင်းပသည့် အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် “Enjoy Tax-Free Shopping! WinaJapan Airline Round-Trip Ticket to Japan” ဆိုသည့် လေယာဉ်လက်မှတ် free ရရှိနိုင်မည့် promotion အစီအစဉ်ကို Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ (၁၃)ရက်နေ့ထိ နှစ်ပတ်ကြာ ပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ Facebook စာမျက်နှာပေါ်ရှိ promotion ပို့စ်တွင် comment များပေး၍ ပြိုင်ပွဲ၌ အနိုင်ရရှိသူများသည် ထိုအခွင့်အရေးအား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ⅱ. Experience the Japan Culture in Tokyo Edo Week (Tokyo Edo Week တွင် ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို လေ့လာနိုင်ခြင်း)
Becomeakimono-wearing beauty! Tokyo Edo week သည် ဂျပန်ရိုးရာ kimono ၀တ်စုံများဝတ်ဆင်၍ ဂျပန်နိုင်ငံရိုးရာအစားအစာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကိုလေ့လာနိုင်သည့် အကြီးမားဆုံး ပွဲတော်အချိန်အခါဖြစ်ပါသည်။
July 17 through to 20, 2018
၂၀၁၈ ဇူလိုင် ၁၇မှ၂၀ ထိ လေးရက်တာ ကျင်းပသောFacebook စာမျက်နှာပေါ်ရှိ promotion ပို့စ်တွင် comment များပေး၍ ပြိုင်ပွဲ၌ အနိုင်ရရှိသူများသည် kimono ၀တ်စုံအား free ၀တ်ဆင်ရမည့် အခွင့်အရေးအား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Tokyo မြို့ Ueno ဒေသတွင် ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့တွင် ရှိနေသူဖြစ်ရမည်။.
အနိုင်ရရှိသူ ၅ယောက်သည် ဆံပင်မိတ်ကပ် ပြင်ဆင်ထုံးဖွဲ့မှုများအပါအ၀င် Kimono ၀တ်စုံ ၀တ်ဆင်ခွင့်free ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အနိုင်ရရှိသူများစာရင်းကို ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကြေညာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ⅲ. Enjoy driving within Chugoku and Shikoku region.
ဂျပန်နိုင်ငံ ရှိ Chugoku နှင့် Shikoku ဒေသ၏ highway လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကားမောင်းနှင်၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒေသ၏အရသာများအား ခံစားချင်လိုပါသလား???????????
Chugoku နှင့် Shikoku ဒေသ၏ highway လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင် ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် စာရင်းဝင်သော နေရာဒေသများနှင့် ရင်သက်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ရှုခင်းများ ရှိပါသည်။ ထပ်မံပြီး ထိုလမ်းတစ်လျှောက်တွင် ဒေသထွက် အစားအသောက်များနှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်းများလည်းရှိသော “Service Areas”ဖြစ်သည့် အတွက် ဒေသ၏ အရသာများအား အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်ပါသည်။နွေရာသီ ဂျပန်ဈေးပွဲတော်တွင် “Green drive campaign! ဟူသော promotion အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက်လည်း ဤနွေရာသီအချိန်အခါတွင့် အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အတွေ့အကြုံများအား အပြည့်အ၀ခံစားလိုက်ပါ။
Period July 1 through to August 31, 2018
Location Chugoku and Shikoku region, Japan
Website http://japanshopping.org/hktojp（Traditional Chinese）
၂၀၁၈ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်အတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေပုံ
သင်္ကြန်အတက်နေ့ နိုင်ငံခြားသားများပိုမို ပါဝင်ပျော်ရွှင်လာ
Music Cruise Tourism
(၃၁.၇.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ပြုပေးထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ
Community Based Tourism in Kayah State
Copyright Mandalay Tourism. A Glance of Zeagwat, Inc.